Raharaha Fahafatesana Diso Napetraka Amin'ny Loza Fetin'ny Mozika Astroworld izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Raharaha Fahafatesana Diso Napetraka Amin'ny Loza Fetin'ny Mozika Astroworld izao
Ny mpisolovava Texas Steve Hastings sy Henry Blackmon ao amin'ny Hastings Law Firm dia nametraka fitoriana tamin'ny Alatsinainy tamin'ny mpanao rap Travis Scott, Cactus Jack Records, Scoremore, ary ireo lazaina ho mpandraharaha ao amin'ny NRG Park mifandraika amin'ireo loza tamin'ny fetiben'ny mozika Astroworld izay nahafatesana olona valo ary maty. maro hafa naratra mafy.
Ny raharaha dia napetraka amin'ny anaran'i Maria Pena ao amin'ny Harris County, Texas. Taorian'ny hetsika tamin'ny zoma alina dia namoy ny zanany lahy Rudy Pena, 23 taona izy.
Ny fitoriana dia nilaza fa tamin'ny fiandohan'ny hetsika dia nanitsakitsaka ny sakana hidirana ny toerana ireo mpijery ary taorian'izay dia nisy vahoaka nirohotra teny an-tsehatra raha nanao fampisehoana i Travis Scott. Ny fiampangana dia manondro ihany koa ny fisian'ireo mpanatrika ankavia mifoka rivotra miaraka amin'ny tsy nahatsiaro tena. Na dia teo aza ireo zava-nitranga ireo ary raha niezaka nanatona ireo sahirana ireo fiara mpamonjy voina, dia nitohy ny seho.
Ny fitoriana dia manamafy fa olana maro no mitovitovy amin'ny tsy firaharahiana sy ny tsy firaharahiana lehibe ataon'ireo Voampanga ary mitaky onitra mihoatra ny $1,000,000.00.